गैह्रकानुनी काम - Mero Sabda
पहिला पहिला यदाकदा साथीहरुको मुखबाट ‘गैह्रकानुनी (इलिगल) तरिकाले काम गर्नेहरुलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेर हिरासतमा हाल्छ’ भन्ने कथन सुनेका थियौं । त्यो कुरा सुन्दा मनमा ‘विचरा’ भन्ने भाव पलाउँथ्यो । त्यतिका रुपैयाँ लगानी गरेर परिवारको सुखको सपना बोकेर आउने अनि एजेन्टको कारणले गैह्रकानुनी तरिकाले लुक्दैभाग्दै काम गर्नु भनेको एक प्रकारको नर्कमा परेको झैं भान हुन्छ । न आफू खुशी कतै जान पाइने । बजारतिर घुम्न जान पनि डराउँदै जानुपर्ने । मनमा त्रास बोकेर बजारमा कसरी घुम्ने होला ।
त्यस्ता कथनहरु सुनेका मात्र थियौं तर आज प्रत्यक्ष आफै परियो । त्यसरी काम गर्न नजाउँ त घरमा पैसा कसरी पठाउने ? दशैंको आगमन हुन लागेको थियो । त्यो बेला साना–साना छोरीहरुलाई नयाँ नाना र श्रीमतीलाई पनि एकसरो नयाँ साडी पनि किनिदिने रहर नभएको होइन । तर आफूले रहर गरेर मात्र नहुने रहेछ ।
कम्पनीले तलब रोकेको दुई महिना भइसकेको थियो । हातमा द्रव्य शुन्य । फेरि दशैंमा दुई छाक चिचिमामा पनि खुवाउनै पर्यो । पल्लोघरमा मिठो–मिठो खाँदा मेरो परिवार चाहिं ओंठ फुस्रो पारेर बसोस् भनेर सोच्न सकिनँ । त्यसैले आँट गरेरै गैह्रकानुनी तरिकाले भए पनि काम गरेर घरमा खर्च पठाउने चाहनाले दिउँसो खानका निम्ति दहीको प्याकेट र पानी खबुस बोकेर काम गर्नुपर्ने स्थलमा ट्याक्सी चढेर पुग्यौं । त्यहाँ पुगेर हामीलाई काम दिने नेपाली साथीले हामीले गर्नुपर्ने काम देखाइ दियो ।
ढलाइ र जोडाइको सबै काम सकिएको घरमा फिनिसिङ गर्नुपर्ने रहेछ । दिनको पचास रियलको मामला थियो । त्यसैले हामीले आफ्नो काम सुरु गर्यौं । केही दिन त भित्री काम थियो र आराम साथ काम गर्यौं, तर जब बाहिरतर्फ काम गर्न थाल्यौं तब अरबको गर्मी कस्तो हुन्छ बल्ल थाहा पायौं । काम गर्दै जाँदा लाग्यो हामी त्यही गर्मीमा जलिरहेछौं । लाग्यो हामी हड्डी र छालाको मानव होइनौं । हाम्रो शरीर एउटा मैनको हो र आगोको रापको छेउमा राखेर हामी पग्लिरहेछौं ।
हरेक विहान साइडमा गएर काम थाल्थ्यौं र जब दिन चढ्दै जान्थ्यो, तब मनमा एउटा सोचाइ जाग्थ्यो कि मेरो यो शरीर केवल आजका दिनभरलाई मात्र हो । भरे दिउँसो दुई बजे पश्चात् रुम पुग्न त के पुग्ने सोचाइ पनि मेटिइसकेको हुन्थ्यो । त्यो घामको रापले शरीर मात्र होइन सोच्ने शक्ति नै पगाली दिनेरहेछ ।
आफ्नो कम्पनीमा काम गर्दाको क्षण र यो परिस्थितिमा गरिरहेको काममा किन यति अन्तर ? हामीले बुझनै सकेनौं । किनकि त्यहाँ काम गर्दा यस्तो गर्मीको आभाष भएको थिएन । तर यसरी कसैको व्यक्तिगत भवनमा काम गर्दा धेरै कष्टको अनुभव भयो । केही दिन यसरी नै कामलाई निरन्तरता दियौं । अनि एक दिन हामी काम गर्ने तर्खरमा लागेका थियौं, एक जना अरबी हामी काम गर्ने स्थानमा आयो । हामी माथिल्लो तलामा थियौं । त्यो अरबी हामीले काम गर्ने भवनमा चिहाउँदै थियो । हामी डरले भित्रै लुक्यौं ।
हामीले सुनेका थियौं कि यसरी गैह्रकानुनी तरिकाले काम गरेको ठाउँमा सिआइडीहरु सादा पोसाकमा निरीक्षण गर्न आउँछन् अरे । अब हामीलाई डरले सताउन थाल्यो । त्यो मानिस खै के के भन्दै कराउँदै थियो, त्यही मौका पारेर पल्लो कोठाबाट भागेर गेटबाट बाहिरियौं र हतार गर्दै सडकमा निस्क्यौं । अनि ट्याक्सीमा चढेर रुम आयौं । रुममा आएर शान्तिको लामो श्वास फेर्यौं । अनि सारा वृतान्त साथीहरुलाई सुनायौं । त्यो सुनेर साथीहरु पनि चिन्तित भए । ‘धन्य बाँचेछौं साथी हो । नत्र पुलिस आएर समाउने रहेछ’ भनेर साथीहरुले अझ डर थपिदिए । त्यसपछि पनि धेरै बेरसम्म मुटु ढुकढुक गरिरह्यो ।
तर भोलिपल्ट त्यही नेपाली साथीले भेटेर भन्यो, ‘तपाईहरु कहाँ भाग्नु भएको ?’ हामीले अघिल्लो दिनको पुलिस आएको कुरा सुनायौ । उसले मुसुक्क हाँस्दै भन्यो, ‘हैट ! त्यो कहाँ पुलिस हो त । त्यो अरबी त काम गर्ने मान्छे खोज्न आएको रहेछ । मैले भेटेर कुराकानी गरेको छु । उसको घरमा अलिअलि काम छ अरे । आजै गएर काम गरि दिनुपर्ने अरे । जाँउ ।’ हामीले पनि भोलिबाट जाने भन्ने कुरा गरे पश्चात् ऊ त्यहाँबाट हिंड्यौं ।
भोलि बिहान हामीलाई लिन आइपुग्यो । हामी पनि ऊसँगै डोहोरिएर बाटो लाग्यौं । ट्याक्सीले साना साना गल्ली छिचोल्दै एउटा घरको फलामे गेटको अगाडि लगेर छाडिदियो । उसले गेटमा भएको ‘डोरबेल’ बजायो । केही क्षण पश्चात् एक जना युवती (जो त्यही घरमा काम गर्ने) ले ठूलो गेटको छेउमा रहेको सानो गेट खोलेर हेरिन् । तुरुन्तै बन्द पनि गरेर गइन् । त्यसको अन्दाजी दश मिनेटपछि एउटा अरबीले आएर ढोका खोल्यो । अनि हामी त्यही गेटबाट भित्र प्रवेश गर्यौं ।
भित्र पसेर यताउता नजर दौडाएँ । त्यो घरमा त्यो अरबी बाहेक अन्य कोही थिएन । ती काम गर्ने युवती पनि त्यहाँ थिइनन् । पछि थाहा भयो । बाहिरका कोही त्यहाँ जाँदा घरका महिला या युवती सबै अन्य कोठामा लुक्छन् अरे । अर्थात् अन्य पुरुषले उनीहरुको महिलालाई हेर्न हुँदैन अरे । यो अरबीहरुको धर्म विशेषमा यस्तो नियम हुन्छ अरे ।